Mon Petit Avatar: King Naresuan
My other half is quiteafan of this movie and last week he got the DVDs for us to watch during the weekday. The reason he bought them is that the Part3start showing from 31st March and he wanted us to refresh our memory. It was quite challenging for me to enjoy the film while reading the Thai caption mostly in royal language. I was kind of discouraged for my ability to understand the language and I managed to get through this somehow. On 31st March, I tried to buy the tickets for Part3but it turned out that we had to wait foraday or two since the English subtitled version has not available yet. Of course we watched that yesterday and it was in deed entertaining. Since it is not so hard to find the trailers in youtube, I have decided to link those in this post. By the way, the movie is about King Naresuan the Great, and you can find out more about the movie here and the King here. I almost forgot, there will be part4but they have not announced the release date yet.
*Afterthought, I wish we could film the life, the struggle, and the tragedy of one of our heros, General Aung San for the generation who doesn't aware of the fact that "Independence has high price".
Posted by Mon Petit Avatar at 11:44 PM
Labels: Film, Thai
ဟိုတစ်လော ရန်ကုန်သွားတော့ ထိုင်းမင်းသားတစ်ပါးနဲ့ ရုရှမင်းသမီးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာအုပ်ဝယ်လာတာ။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ပါ။ အဲဒါ ခရီးသွားတော့ လမ်းမှာဖတ်မလို့ ယူသွားတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ လမ်းမှာ နည်းနည်းဘဲ ဖတ်ရသေးတယ်။ ကားက တစ်လမ်းလုံးမူးတော့ မဖတ်နိုင်တော့ဘူး စာအုပ်လဲ ဘေးနားချထားလိုက်ရတယ်။ ကားပေါ်ဆင်းတော့ စာအုပ်ကိုမေ့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်.. နှမြောလိုက်တာ။ အစဘဲ ရှိသေးတာ ဖတ်ရတာ
ခု ပြန်လိုချင်တော့ ခက်သွားပြီ။
အချိန်ရရင် ဒီဇာတ်လမ်းလေး ကြည့်ဦးမယ်
ထိုင်းဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူတတ်အောင်ရိုက်တဲ့ကားဆိုတော့ထိုင်းတွေကြားမှာတော့ကြိုက်ကြတယ်ချော။ စာအုပ်ကိုရန်ကုန်ပြန်ဖြစ်ရင်ဝယ်ထားပေးမယ်လေ နာမည်လေးသာပြော။
နမူနာ ပေးထားတဲ့ ၃ ပိုင်းစလုံးကို ကြည့်သွားပါတယ်၊ တော်တော်ကောင်း မယ့်ပုံပဲ၊ တကယ့်ကို ခမ်းခမ်းနားနား ရိုက်ထားတာပဲ၊ “သူ့ကျွန်မခံပြီ” နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး၊ တကယ်သာ ရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို ရိုက်ချင်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ၊ ကျနော်လည်း ထပ်တူဆန္ဒ ရှိပါတယ်..။
ခမ်းနားလိုက်တာ...အဲသလို ထုနဲ့ထည်နဲ့ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ရိုက်ပြဖို့က နည်းပညာအပြင် စရိတ်စကလည်း လိုသေးတာ၊ တို့ဆီမှာ ရိုက်မယ်ဆို ရိုက်စရာ သမိုင်းနောက်ခံတွေ အများကြီးရယ်...။ Anna and the Kingနဲ့ The King and I ကြည့်ဖူးတယ်။ ထိုင်းနန်းတွင်းကားတွေ အမလည်း ကြိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးတာ မတွေ့ဘူးနော် ကြည့်ချင်တယ်....
အဲဒီကားစပြတုန်းက ထိုင်းသူငယ်ချင်း ထိုင်းပြန်လည်တုန်း ကြည့်ခဲ့ရတာပြောပြတယ်။ အဲဒီတုန်းကတည်းက ကြည့်ချင်နေတာ။
ဟုတ်တယ်ကိုညီလင်းသစ် “သူ့ကျွန်မခံပြီ” နဲ့တော့တခြားစီဘဲ။
စာတမ်းထိုးမပါလို့စိတ်ညစ်လိုက်ရတာမပြောနဲ့မမချစ် ရန်ကုန်ကမြန်မာစာတမ်းထိုးနဲ့အချပ်က အကုန်မပါလို့ဒီကထပ်ဝယ်ပြီးကြည့်ရတာ
သူတို့ကပိုက်ဆံကလဲအကုန်ခံနိုင်တာကိုး ဘတ်သန်း ၇၀၀ ကုန်တယ်တဲ့။
ကြည့်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ အမြင်ကိုလဲလေ့လာလို့ရတာပေါ့ စူးနွယ်လေး။
ကြည့်ချင်တယ် .. မနေ့က မန့်တယ် ဘာလို့မပေါ်တာလဲမတိ
ပထမတော့ လိပ်စာတောင်းပြီးပို့ပေးမလို့ စူးနွယ်နဲ့ Baby ကို
နောက်မှ Eng subtitle နဲ့မရှိတာကိုစဉ်းစားမိတယ်